Raw Lapatinib (231277-92-2) HPLC ≥98% | AASraw
/ Products / Ny hafa / Lapatinib
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny famokarana maimaimpoana avy amin'ny gram ka hatramin'ny lamina mavesatra ao Lapatinib (CAS 231277-92-2), eo ambany fitondran'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Lapatinib vovoka dia zava-mahadomelina manohitra ny homamiadana novolavolain'ny GlaxoSmithKline (GSK) ho fitsaboana tranganà fototarazo toy ny homamiadan'ny nono sy ny havokavoka. Neken'ny FDA ny Martsa 13, 2007, mba hampiasaina amin'ny marary manana kanseran'ny nonastese metastatic miaraka amin'ny Capecitabine mifoka rongony. Ny Lapatinib dia karazam-bozaka mpanangom-bokatra 2 (HER2 / ERBB2) sy ny tsimokaretin'ny tirosine kinases (HER1 / EGFR / ERBB1). Mifatotra amin'ny sehatra phosphorylation ao amin'ny atidoha izy io mba hisakanana ny autophosphorylation receptor amin'ny ligand.
I.Lapatinib fototra karazana:
Meny fitetezana 581.0575432
II. Lapatinib (231277-92-2) fampiasana amin'ny tsingerim-pandaminana
Lapatinib (CAS 231277-92-2), ny anaran'ny mpivarotra dia Tykerb, Tyver.
1) Lapitinib dia takelaka azo alaina amin'ny vava.
2) Tablets tonga amin'ny 1 dosage, 250mg.
3) Mitondrà lapitinib araka ny baikon'ny dokotera anao.
4) Lapitinib dia tokony horaisina farafahakeliny aloha, na farafahakeliny iray aorian'ny sakafo (mandray dosa iray miaraka amin'ny fotoana iray isan'andro, ary ny fizarana ny doses dia tsy voatery).
5) Aza mihinana na misotro vokatra grapefruit raha maka Lapatinib (231277-92-2).
6) Raha tsy mitandrina ny lapitinib ianao dia raiso izany raha vao tsaroanao io andro io. Raha tsy mitandrina andro iray ianao, aza ampidinina ny dose ny ampitso. Andramo fotsiny ilay dosie tsy voatanisa. Tadiavo ny mpitsabo anao raha tsy azonao antoka izay tokony hatao.
7) Ny dokoteranao dia mety manitsy ny doka anao ao amin'ny lapatinib, arakaraka ny fandeferanao ny fitsaboana.
3. Fampitandremana ao amin'ny Lapatinib
Ny Lapatinib dia mety miteraka voka-dratsin'ny aretina izay mety ho mafy oravana. Ny voka-bary dia mety hitranga aorian'ny andro maromaro na volana maromaro aorian'ny fanombohan'ny fitsaboana amin'ny Lapatinib (CAS 231277-92-2). Lazao amin'ny dokotera raha manana aretina ny aty ianao. Raha misy tranga iray amin'ireto soritr'aretina ireto dia miantsoa avy hatrany amin'ny dokotera: jihin-koditra, mibontsina ny hoditra na ny maso, ny dipoavatra maizimaizina, ny fanaintainana eo amin'ny tapany ankavanana amin'ny vavony, ny ratra tsy fahita na ny mangana, na ny loko matevina.
Arovy ny fotoana rehetra miaraka amin'ny dokotera sy ny laboratoara. Ny mpitsabo anao dia handidy fitsapana momba ny laboratoara mialoha sy mandritra ny fitsaboana anao mba hahitana raha mety ho simba ny atin'ny vatanao na simban'ny lapatinib.
Miresaha amin'ny dokoteranao momba ny mety ho fisian'ny lapatinib.
Ny Lapatinib dia karazam-pihetseham-pandrenesana kininina (biology therapy) izay antsoina hoe protein inhibitor proteinina (TKI). Ny fitsaboana voatokana ampiasaina ho an'ny kansera izay manana proteinina be dia be antsoina hoe HER2 (mpanangom-bokatra 2).
Ny kanseran'ny nono dia manana HER2 be dia be. Izy ireo dia antsoina hoe HER2 positivecancers. HER2 mahatonga ny sela homamiadana sy hizara. Ny Lapatinib (231277-92-2) dia manova ny HER2 mba hampijanona ireo sela hijanona na ho faty.
IV. Ahoana no hividianana Lapatinib avy any AASraw?
Ho voalohany ny mijery ny "Lapatinib" hanafoana ny valin-